Suuqyayaashu Miyey Ka Quusanayaan Shakhsiyan? | Martech Zone
Suuqyayaashu Miyey Ka Quusanayaan Shakhsiyan?
Axad, Maarso 29, 2020 Axad, Maarso 29, 2020 Garin Hobbs
Maqaalka dhawaan Gartner ayaa soo wariyay:
Marka la gaaro 2025, 80% dadka suuqleyda ah ee maal-galiyay shakhsiyeynta ayaa ka tagi doona dadaalkooda.
Saadaalinta 2020: Suuqgeeyayaasha, Iyagu Keliya Maaha Taas Adiga Adiga.
Hadda, tani waxay umuuqan kartaa aragti xoogaa qaylodhaan leh, laakiin waxa maqan waa macnaha guud, waxaanan u maleynayaa inay kan tahay this
Waa run run ahaan caam ah in dhibaatada hawsha la cabiro iyadoo la tixgelinayo aaladaha iyo agabyada qofku haysto. Tusaale ahaan, qodista boholo yar yar oo shaaha ah waa khibrad aan dhammaad lahayn oo ka xun marka loo eego dhabarka dambe. Si la mid ah, adoo adeegsanaya taariikh dhacsan, barnaamijyo xog dhaxal gal ah iyo xallinta farriimaha si loo wado istaraatiijiyaddaada shakhsi ahaaneed ayaa ka qaalisan kana dhib badan sidii loo baahnaa. Aragtidani waxay u muuqataa inay taageerto xaqiiqda ah, markii la waydiiyo, suuqleyda ayaa soo xigtay, la'aanta ROI, halista maaraynta xogta, ama labadaba, sababahooda asaasiga ah ee u tanaasulka.
Maaha wax lala yaabo. Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed waa mid adag, waxyaabo badanna waxay u baahan yihiin inay ku soo urursadaan hal-ku-dheg si loogu sameeyo si wax ku ool ah oo hufan. Sida dhinacyo badan oo ganacsiga ka mid ah, fulinta fulinta istiraatiijiyadda suuq-geynta waxay timaaddaa isgoyska saddex qaybood oo muhiim ah; Dadka, Nidaamka, iyo Teknolojiyada, iyo dhibaatooyinka ayaa soo ifbaxa marka qaybahaasi aysan sameyn karin - ama aysan awoodin - inay la jaanqaadaan midba midka kale.
Aynu bilowno Dadka: Shakhsiyeyn macne leh oo wax ku ool ah waxay ka bilaabmaysaa yeelashada ujeedo sax ah, si macaamilka looga dhigo bartanka sheeko qiimo-dhexaad ah. Qiyaasta AI, falanqaynta saadaalinta ama otomatiga ayaa badali kara qodobka ugu muhiimsan isgaarsiinta: EQ. Markaa, helitaanka dad sax ah, oo leh maskax sax ah, waa aasaas.
Shakhsiyeyn shakhsi: Geeddi-socod
Marka xigta, aan eegno Hab-. Nidaamka olole ee ugu habboon waa inuu tixgeliyaa yoolalka, shuruudaha, ka-qayb-galka, iyo jadwalka waqtiga ee qayb-bixiye kasta, una oggolaado kooxaha inay u shaqeeyaan qaabkii ay ugu kalsoonaayeen, ugu raaxaysanayeen uguna wax-qabadka badnaayeen. Laakiin suuqleyda aad u tiro badan ayaa lagu qasbay inay tanaasul sameeyaan, iyagoo u arka in nidaamyadooda la xadiday oo ay tilmaameen cilladaha agabkooda suuq-geynta iyo barxadaha. Nidaamku waa inuu u adeegaa kooxda, maaha inuu u adeego si kale.
Ugu dambeyntii, aan ka hadalno Technology. Qalabkaaga suuq-geynta iyo qalabkaagu waa inuu noqdaa mid awood u leh, isku dhufasho xoog leh, oo aan ahayn qodob xaddidan. Shakhsiyeyn shaqsiyadeed waxay ubaahantahay suuqleydaas ogaan macaamiishooda, iyo garanaya macaamiishaadu waxay u baahan yihiin xog data xog badan, oo laga helay ilo badan, oo si joogto ah loo soo ururiyey loona cusbooneysiiyey. Kaliya helitaanka xogta kuma filna in ku filan. Waa awoodda si dhakhso leh looga dhex helo loona kala shaandheeyo fikradaha waxqabadka leh ee u oggolaanaya suuqleyda inay u soo gudbiyaan farriin shakhsi ahaaneed oo ilaalinaysa xawaaraha iyo duruufaha maanta ee macaamiisha.
Qaar badan oo ka mid ah kuwa ugu caansan iyo ku kalsoon tahay dhufto ee la halgama inay la kulmaan baahida sii kordheysa ee caqabadda ku ah suuqgeynta casriga ah Xogta ku kaydsan qaabdhismeedyada tabal duugga ah (xiriir ama haddii kale), asal ahaan way ka adag tahay (iyo / ama qaali) in la keydiyo, la cabbiro, la cusbooneysiiyo oo la weydiiyo marka loo eego xogta ku jirta dhismayaasha aan tabta ahayn, sida qaababyada.
Inta badan barnaamijyada fariimaha dhaxalka leh waxay adeegsadaan xog ururin ku saleysan SQL, iyagoo u baahan in suuqleydu ay yaqaanaan SQL, ama ku qasbaan inay ka tanaasulaan xakameynta weydiimahooda iyo qeybinta IT ama Injineerinka. Ugu dambeyntiina, barnaamijyadan duugga ahi waxay sida caadiga ah xogtooda ku cusbooneysiiyaan ETL-yada habeenki iyo cusbooneysiinta, iyagoo xaddidaya awoodda suuqleyda inay u soo gudbiyaan farriin la xiriirta oo waqtigeeda ku habboon.
Soo bandhigida Iterable
Taa bedelkeeda, barnaamijyada casriga ah sida Caano, Isticmaal qaab dhismeedka xogta NoSQL ka sii ballaadhin kara, oo u oggolaanaya durdurinta xogta waqtiga-dhabta ah iyo iskuxirka API ee ilo kala duwan isku mar. Qaab dhismeedka xogta noocan oo kale ah ayaa si dabiici ah uga dhakhso badan qayb ahaan oo si fudud loo heli karo si loo kaxeeyo shakhsiyaadka shakhsi ahaaneed, taasoo si weyn u yareyneysa waqtiga iyo fursadda qiimaha dhismaha iyo bilaabista ololeyaasha.
La dhisay dhawaanahan marka loo eego tartamayaashooda aadka u adag, inta badan barnaamijyadan sidoo kale waxay ku jiraan ama taageeraan kanaallo badan oo isgaarsiineed, sida emaylka, riixitaanka mobilada, gudaha-app, SMS, riixista biraawsarka, dib u habeynta bulshada iyo boostada tooska ah, awood u siinta suuqleyda inay si fudud u gaarsiiyaan hal khibrad oo isdaba-joog ah iyada oo macaamiisha ay khibradooda uga wareejinayaan kanaalada calaamadaha iyo barta taabashada.
In kasta oo xalalkani ay simbiriirixan karaan qalooca barnaamijyada isla markaana ay gaabin karaan waqtiga suuq-geynta suuqgeynta, korsashada ayaa aad uga gaabisay magacyada waaweyn ama kuwa muddada dheer taagnaa, kuwaas oo dhaqan ahaan aad u dhowrsan una halista badan. Sidaa darteed, faa iidada ugu badan waxay u wareegtay noocyo cusub ama soo ifbaxaya oo xambaarsan alaab farsamo aad u yar oo dhaxal ah ama dareen ahaan shooga.
Macaamiisha uma badna inay iska daayaan filashadooda qiimaha, raaxada iyo waaya aragnimada waqti dhow. Xaqiiqdii, taariikhdu waxay na baraysaa in rajooyinkaas ay u badan tahay inay sii kordhaan oo keliya. Ka tagida istiraatiijiyaddaada shaqsi ahaaneed wax macno ah malahan suuq aad u camiran, waqti ay khibradda macmiilku muran la’aan tahay fursad kasta oo suuqley ah oo ay ku gaarsiin karto kuna kala duwanaan karto qiimaha ay leeyihiin, gaar ahaan maaddaama ay jiraan fursado badan oo la heli karo.
Halkan waxaa ah shan ballanqaad oo ay suuqleyda iyo ururradoodu sameyn karaan si ay uga caawiyaan iyaga oo u maraya horumar guul leh:
Qeex waayo-aragnimo aad rabto inaad wax gayso Taasi ha noqoto barta ay ku wada socdaan wax kasta oo kale.
Oggol in isbeddelku lama huraan yahay iyo gasho waxaa si.
Qiimee xalalka laga yaabo inay cusub yihiin ama aan la aqoon.
Go'aanso in abaalmarin natiijada ayaa ka weyn khataraha la dareemayo.
Dadku ha qeexaan geedi socodka; ha u socodku dejiyo shuruudaha tikniyoolajiyadda.
Calaamadaha waxay leeyihiin si loo qodo godka, laakiin ma aadan sameyn waxay leeyihiin inaad isticmaasho shaaha.
Codso Demo Iterable
Tags: la arki karoshaqsiyeynta suuqgeyntashakhsi ahaaneedshakhsiyeynta iibinta
Garin waa Agaasimaha Istaraatiijiyadda Deal ee Caano, Mashruuc awood u siinaya suuqleyda B2C inay la wareegaan istiraatiijiyadooda istiraatiijiyadeed ee marinka iyagoo adeegsanaya moodel xog aad u jajaban oo la cabbiri karo si loogu wargaliyo isweydaarsiga kanaalka 1: 1 ee loo maro emaylka, moobiilka, webka iyo kanaalada bulshada.
Faafida COVID-19: Xayeysiinta iyo Saamaynta Suuqgeynta